စာနာတတ်တဲ့လူတိုင်း စိတ်ထိခိုက်သွားစေမယ့် ပုံရိပ်များ | Buzzy
စာနာတတ်တဲ့လူတိုင်း စိတ်ထိခိုက်သွားစေမယ့် ပုံရိပ်များ
ခံစားမှုရသစုံပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ...
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အခါ ပုံထဲမှာပါတဲ့အရာတွေက သူတို့နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းကို ပြောပြနေတယ်လို့ သင့်စိတ်ထဲမှာခံစားမိဖူးလား?တစ်ခါတစ်လေ ဓာတ်ပုံတွေကပဲ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုပေးနိုင်ပြီး တစ်ချို့ပုံတွေဆို သင့်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေပါတယ်။
သင့်မျက်နှာမှာ အပြုံးပန်းပွင့်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သလို မျက်ရည်တွေစီးကျအောင်လည်း ဓာတ်ပုံတွေက စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ပုံတွေက သင့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုလျင်မြန်စေပြီး စစ်မှန်တဲ့ဘ၀တစ်ခုကို ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။အားလုံးဟာ သူတို့နည်းအတိုင်းရိုးရှင်းစွာလှပနေတယ်.. ကြည့်ကြည့်ပါ။
ဓာတျပုံတဈပုံကိုကွညျ့တဲ့အခါ ပုံထဲမှာပါတဲ့အရာတှကေ သူတို့နောကျကှယျကဇာတျလမျးကို ပွောပွနတေယျလို့ သငျ့စိတျထဲမှာခံစားမိဖူးလား?တဈခါတဈလေ ဓာတျပုံတှကေပဲ ခိုငျမာတဲ့ စိတျဓာတျကိုပေးနိုငျပွီး တဈခြို့ပုံတှဆေို သငျ့ကိုစိတျမကောငျးဖွဈစပေါတယျ။
သငျ့မကျြနှာမှာ အပွုံးပနျးပှငျ့အောငျဖနျဆငျးနိုငျသလို မကျြရညျတှစေီးကအြောငျလညျး ဓာတျပုံတှကေ စှမျးဆောငျနိုငျတယျ။ ဖျောပွထားတဲ့ပုံတှကေ သငျ့ရဲ့နှလုံးခုနျနှုနျးကိုလငျြမွနျစပွေီး စဈမှနျတဲ့ဘဝတဈခုကို ခံစားမိပါလိမျ့မယျ။အားလုံးဟာ သူတို့နညျးအတိုငျးရိုးရှငျးစှာလှပနတေယျ.. ကွညျ့ကွညျ့ပါ။
The happiness of life can touch absolutely everyone
The greatest of victories.
The most loyal friend.
I will love you ’till death do us part.
Even the strongest have to cry.
Because I know how it feels...
That’s one cute little general.
နှစ် ၃၀ အတွင်း မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တစ်ယောက် မျက်နှာခွဲစိတ်မှု့တွေပြု လုပ်ပြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံ အစုံစုံ
မိဘတွေ ကိုယ့်ကလေးရဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့ သတိပေးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်